Eyona Akhawunti yeNtengiso ye-Intanethi e-UK ngoJanuwari 2022 🥇 Iinkonzo kunye neNkcitho yaNgatyhilwa!
Eyona Akhawunti yeNtengiso yase-UK yaBarhwebi kwi2022-Isikhokelo esipheleleyo!
Ukuhlaziywa: 17 January 2022 Inyaniso ihlolwe
Siye saphonononga i Iiakhawunti ezilungileyo zokurhweba e-UK ngo-2022.
I-akhawunti yokurhweba iya kukuvumela ukuba ufake imali kwi-a umthengisi wase-UK olawulwayo, kwaye uthenge kwaye uthengise amawaka ezixhobo zemali ngokucofa iqhosha. Kukho amakhulukhulu abarhwebi kwindawo ye-intanethi enikezela ngeeakhawunti zokurhweba, ke ukwazi ukuba leliphi iqonga onokuthi ukhethe kulo kunokuba ngumngeni.
Ngaloo ndlela, singacebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu esinzulu kwiiAkhawunti zoRhwebo zase-UK eziBalaseleyo zabarhwebi ngo-2022. ababoneleli abangcono ngoku kwimarike, kodwa sikunika iingcebiso eziluncedo malunga nokuba zisebenza njani iiakhawunti zokurhweba.
Qaphela: Nangona iimethrikhi ezinje ngeentlawulo, iikhomishini, iintlawulo, kunye nomgangatho zizinto ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha Iakhawunti yorhwebo yase-UK, kufuneka uqinisekise ukuba iqonga lilawulwa. Oku kuya kuqinisekisa ukuba imali yakho ihlala ikhuselekile ngalo lonke ixesha.
Zithini iiAkhawunti zokuThengisa?
Iiakhawunti zokurhweba ngamaqonga nje akwi-Intanethi akuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise izixhobo zezemali ukonwaba kwikhaya lakho. Banikezelwa kwaye baququzelelwe ziifemu zabarhwebi bemveli, uninzi lwazo lulawulwa yimibutho ephambili yelayisensi efana neGunya lokuZiphatha kwezeziMali (i-FCA). Ngamanye amaxesha, umrhwebi unokugcina iphepha-mvume kubalawuli bamanye amazwe- njenge-ASIC e-Australia okanye i-CySEC yaseCyprus.
Nokuba yeyiphi na indlela, ukuze uthengise kunye nomrhwebi okwi-Intanethi, kuyakufuneka uvule iakhawunti yorhwebo. Inkqubo ihlala ifana kakhulu nokuba ukhetha liphi iqonga. Umzekelo, kuya kufuneka unikeze uluhlu lweenkcukacha zakho, njengegama lakho elipheleleyo, idilesi yasekhaya, kunye nomhla wokuzalwa. Ukuhambelana nemigaqo yokuchasana nemali ngokungekho semthethweni, iiarhente zabarhwebi ziya kufuneka nazo ziqinisekise ubungqina bakho.
Oku kufuna ukubonelelwa nge-ID yakho ekhutshwe ngurhulumente, njengepaspoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba. Nje ukuba ugqithe kuseto lokuqala, uyakufuna ukuxhasa ngemali iakhawunti yakho yorhwebo. Ngokwenza njalo, uya kuba nakho ukutyala imali kuluhlu olupheleleyo lwee-asethi eziyimali. Oku kubandakanya yonke into esuka kwisitokhwe kunye nezabelo, izinto zorhwebo, ii-indices, amaxabiso enzala, iibhondi, kunye nee-cryptocurrensets.
Izibonelelo ezigqithileyo zokusebenzisa ukuvula i yorhwebo ntengiso iakhawunti kukuba ungatyala imali kwiiasethi ngonqakrazo lweqhosha. Oku akubandakanyi kuphela ii-PC zekhompyuter kunye neelaptops, kodwa ezinye zeakhawunti ezilungileyo zokurhweba kwi-Intanethi ziza nesoftware esebenzayo ngokupheleleyo. Kananjalo, oku kufanelekile ukuba ufuna ukuthenga kunye nokuthengisa iiasethi xa usendleleni.
IiPros and Cons of Use Akhawunti yoRhwebo yase-UK
Amakhulu ama-akhawunti ezorhwebo kwi-Intanethi onokukhetha kuzo
Inkqubo yokuvula iakhawunti ithatha imizuzu
Imali yedipozithi enebhanki / ikhadi lekhredithi, i-e-wallet, okanye iakhawunti yebhanki
Amawaka ezixhobo zemali zokutyala imali kuzo
Ezinye iiakhawunti zorhwebo ezikwi-Intanethi zibonelela ngokurhweba ngaphandle kwekhomishini
Ukusasazeka kuya kukhuphisana ngakumbi e-UK
Uninzi lwabarhwebi base-UK balawulwa yi-FCA
Ayizizo zonke iiakhawunti zokurhweba ezikwi-Intanethi ezilawulwayo-inyathela ngononophelo
Uya kudinga ukutyala imali kwisiseko se-DIY
Iifowuni zokuphakamisa zisebenza kubarhwebi base-UK
Loluphi uTyalo-mali endinokulwenza ngeAkhawunti yokuRhweba yase-UK ekwi-Intanethi?
Ukuba uzingela ii-akhawunti ezilungileyo ze-UK zorhwebo ze-2021, ke singaphumelela iipesenti ezingama-82% kunye ne-avareji ye-35-45% ngenyanga yokurhweba ngenzuzo yokucinga ukuba ujonge ukuthenga nokuthengisa iiasethi ngexesha elifutshane. Ngamanye amagama, ujonge ukwenza inzuzo ngokuhamba kwexesha elifutshane, ngokuchasene nokubambelela kutyalo mali kangangeminyaka eliqela.
Nangona kunjalo, iiakhawunti zokurhweba ezikwi-Intanethi zihlala zivela ngeendlela ezimbini-iiCFD kunye ne-forex. Makhe sihlolisise ezi klasi zimbini zeenkcukacha.
IiAkhawunti zoRhwebo zeCFD e-UK
Izivumelwano zomahluko, ze-'CFDs 'ezilula, zikuvumela ukuba uthengise isixhobo semali ngaphandle kokuba ube uneasethi esezantsi. Endaweni yoko, ucinga nje ngexabiso elizayo leasethi. Oku kuluncedo olukhulu ukuba ungumrhwebi wosuku, njengoko kukunika ukufikelela kumawaka eeasethi ekunokuba nzima ukutyala kuzo.
Umzekelo, kwangoko kwangoko i-2021 ixabiso leoyile libetha kumgangatho osezantsi, ngexabiso elingaphezulu nje kwe- $ 20 ngomgqomo. Ukuba ufuna ukuthelekelela ukuba amaxabiso exesha elizayo eoyile aya kunyuka kwiintsuku okanye kwiiveki ezizayo, konke okuya kufuna ukuyenza kukubeka 'i-odolo yokuthenga' nge Urhwebo lweCFD akhawunti.
Ngaphandle kokusetyenziswa kweCFD ukuba akunakwenzeka ukuba utyale imali kwioyile, njengoko kuya kufuneka ube ngumnikazi kwaye ugcine iasethi. Ngale nto ithethwayo, ayisiyioyile kuphela onokutyala kuyo ngeakhawunti yakho yeCFD yorhwebo. Ngokuchasene noko, unokuthenga kwaye uthengise uninzi lweeklasi zeeasethi.
✔ Izitokhwe kunye neZabelo
✔ Izalathiso zeNtengiso yeStock
✔ Iimpawu ezixabisekileyo
✔ Umgangatho wenzala
Njengoko sigubungela iinkcukacha ezithe kratya ezantsi, iiakhawunti zeCFD ezikwi-Intanethi zikunika inketho yokusebenzisa amandla, okuthetha ukuba ungatyala imali ngaphezu kweakhawunti yakho. Ngapha koko, uya kuba nokukhetha ukuthengisa ngokufutshane iasethi. Oku kuthetha ukuba unokuqikelela kwixabiso leeasethi ezihambayo phantsi.
IiAkhawunti zoRhwebo lwe-Forex e-UK
Uninzi lweeakhawunti zokurhweba ezikwi-Intanethi zikwanika ukufikelela kwisithuba se-multi-trillion seponti ye-forex. Kwabo abangaziyo, olu didi lweasethi lubhekisa ekuthengweni nasekuthengisweni kweemali. Uluvo oluphangaleleyo kukuzuza ngokunyuka kwamaxabiso amancinci phakathi kweemali ezimbini- okwaziwa ngokuba yi "forex pair".
Umzekelo, masithi inqanaba lotshintshiselwano phakathi kwe-EUR / USD okwangoku li-1.10. Oku kuthetha ukuba kwi-Euro nganye, umthengi ufumana i-1.10 yeedola zaseMelika. Ukuba ucinga ukuba ixabiso le-EUR liza kunyuka xa kuthelekiswa ne-USD, ungabeka 'i-oda yokuthenga'. Ngenye indlela, 'ukuthengisa ukuthengisa' kuya kubekwa ukuba ucinga okwahlukileyo.
Ngokubalulekileyo, izinga lotshintshiselwano phakathi kwe-EUR / USD- kunye nezinye ezininzi zezibini ze-forex, zihamba kwisibini-nge-yesibini. Kananjalo, ilungile kwabo bacwangcisa ukurhweba ngemini. Ngaphezu koko, indawo ye-forex isebenza kwi-24/7, ukuze ukwazi ukurhweba ngeemali ngaphandle kokukhathazeka malunga neeyure zentengiso.
Iibini zokurhweba nge-Forex zahlulwe zaziindidi ezintathu eziphambili - ubukhulu, abantwana, kunye neexotic.
Izibini eziphambili zezona zithengiswa kakhulu kwihlabathi. Oku kuthetha ukuba uyakuxhamla ekusasazeni ngokuqinileyo, kunye nokuqinisekisa ukuba uya kuba nemali imini nobusuku.
Olona phawu lubalulekileyo lwezibini eziphambili kukuba ziya kuhlala zineedola zaseMelika. Enye imali eyenza isibini iya kuba yimali eyomeleleyo. Cinga kwimigca yeponti sterling (GBP), i-euro (i-EUR), kunye nedola yase-Australia (AUD).
Izibini eziphambili ezidumileyo zibandakanya:
Iibini ezincinci ze-forex ziqulathe iimali ezimbini ezomeleleyo, kodwa akukho mfuneko yokuba ziqulathe idola yaseMelika. Usaza kuxhamla kusasazeko lokhuphiswano xa urhweba ngabantwana, kodwa hayi ngokuqina njengobungangamsha. Ngapha koko, ukuthengiswa kwemali kuya kuhlala kuqinile, kodwa kwakhona, kungomelele njengezibini eziphambili.
Izibini ze-forex ezincinci ezidumileyo zibandakanya:
Ukuba ufuna ukufumana ukubonakaliswa kwemali ezikhulayo, unokufuna ukuphonononga ukuba ngaba iakhawunti yakho yokurhweba ye-forex ibamba iindidi zangaphambili ze-forex. Isibini ngasinye siya kuba nemali evela kuqoqosho olukhulayo (njengeTurkey okanye iBrazil), ecaleni kwedola yaseMelika.
Ngokungafaniyo nee-majors kunye nabantwana, ii-exotic zinokungazinzi kakhulu, kwaye zihlala zinobunzima kumanqanaba obuthathaka obutyebi. Ngaphaya koko, uyakufumanisa ukuba ukusasazeka kwezibini ezingaqhelekanga kuhlala kubanzi kakhulu.
Iintlobo zeeAkhawunti zoRhwebo zase-UK
Iiakhawunti zokurhweba zihlala zingena kwenye yeendlela ezimbini- iakhawunti yokuthengisa okanye iakhawunti yobungcali. Ukuba ungumrhwebi wemihla ngemihla ojonge ukuthenga kunye nokuthengisa iiasethi ngendlela engaqhelekanga, uya kuwela ngaphakathi komda wotyalo mali.
Oku kuthetha ukuba uya kuthintelwa kubungakanani besixokelelwano onokuthi usisebenzise. Kananjalo sigubungela ukungena kunye nokuphuma kokufumana iinkcukacha ezithe kratya ezantsi, njengomhlali wase-UK uboshwe yimimiselo ebekwe yi-ESMA. Oku kuthetha ukuba uya kubanjwa ukuze ufumane amandla phakathi kwe-2: 1 kunye ne-30: 1-kuxhomekeke kwimpahla onqwenela ukuyithengisa.
Kwesinye isiphelo sesibuko, abathengisi abaziingcali bayakwazi ukusebenzisa imali ephezulu kakhulu yokufumana amandla ngeakhawunti yabo yokurhweba yase-UK-ihlala iphakame njenge-500: 1. Abarhwebi abaqeqeshiweyo bahlala beqhelekile kwimirhumo yokhuphiswano ngakumbi, njengoko ivolumu yabo inkulu kakhulu kunabatyali mali.
Iimali ezifakwa kwiAkhawunti yoRhwebo kunye nokuTsala imali
Ukuba ujonge ukutyala imali yokwenyani kwindawo yokurhweba kwi-Intanethi, kuyakufuneka ucinge ngendlela oyikhethileyo yedipozithi. Uninzi lwabarhwebi abakwi-Intanethi bakunika uluhlu lwezinto onokukhetha kuzo, ezinje:
Ucingo lwaMazwe ngaMazwe
Imirhumo yeAkhawunti yoRhwebo yase-UK
Ukuze urhwebe kwi-Intanethi kunye nomrhwebi wase-UK, kuya kufuneka uhlawule iifizi. Emva kwayo yonke loo nto, abathengisi bakushishino lokwenza imali. Imirhumo ethile ekufuneka uyihlawule inokwahluka kakhulu ngokuxhomekeke kwiqonga ekuthethwa ngalo.
Nangona kunjalo, apha ngezantsi sichaze ezinye zeefizi eziphambili ekufuneka uzithathele ingqalelo ngaphambi kokukhetha iakhawunti yorhwebo.
🥇 Imirhumo yokufaka kunye nedipozithi
Abanye oomrhwebi baya kukuhlawulisa xa ukhetha ukufaka okanye ukukhupha imali. Ukuba bayakwenza oko, konke kuqinisekile ukuba oku kuyakufika ngendlela yepesenti. Umzekelo, masithi umboneleli weakhawunti yorhwebo uhlawula iipesenti ezi-2 kwiidipozithi zeVisa. Ukuba ubunokufaka i- $ 1,000 kwiakhawunti yakho yorhwebo, ubuya kuhlawula umrhumo we- $ 20.
Abanye abathengisi baya kongeza oku kwixabiso lentengiselwano, oko kuthetha ukuba i-hat ye-1,020 iya kuthathwa kwikhadi lakho. Ngenye indlela, banokuyikhupha kwibhalansi yakho. Kule meko, ungaqala nge-akhawunti ye-akhawunti eseleyo ye- $ 980, nangona ikhadi lakho lalitsaliwe nge- $ 1,000.
Kuya kufuneka uhlawule ikhomishini yokurhweba ngalo lonke ixesha usenza utyalomali ngeakhawunti yakho yorhwebo. Ukuba kunjalo, abathengi basebenzisa imodeli yeepesenti eyahlukileyo. Ngokwemigaqo kaLayman, umrhumo wokurhweba uza kuchazwa njengepesenti, emva koko uphindaphindwe ngokobukhulu beshishini lakho.
Iakhawunti yokurhweba ngerhafu ihlawulisa ikhomishini ye-1%
Utyala imali eyi- $ 5,000 kwi-CFD yegolide
Oku kufikelela kwikhomishini ye- $ 50
Kuya kufuneka uhlawule ikhomishini xa uphuma kurhwebo lwakho.
Utyalo-mali lwakho lweCFD lwegolide ngoku lixabisa i-6,000
Kwikhomishini yorhwebo ye-1%, uhlawula umrhumo we- $ 60
Kananjalo, kuya kufuneka uhlawule ikhomishini yorhwebo kuzo zombini iziphelo zorhwebo. Ngale nto ithethwayo, uninzi lweeakhawunti zokurhweba esizicebisayo kweli phepha zikuvumela ukuba uthengise ngaphandle kwekhomishini. Oku kunakho ukukugcinela iimfumba zemali ezichithwe kwimirhumo.
Nokuba yeyiphi na iakhawunti yokurhweba oyibhalisileyo, uya kuhlala uhlawula umrhumo ongalunganga ngendlela ye 'sasaza'. Lo ngumahluko phakathi 'kokuthenga' kunye 'nokuthengisa' ixabiso leasethi. Kwimeko yokurhweba kwangaphambili, ukusasazeka kubonisiwe 'iipipi'. Kwintengiso yeCFD, kubhekiswa kuyo 'kumanqaku'
Nokuba yeyiphi na indlela, kungcono ukubala ukusasazeka ngokweepesenti, njengoko oku kuya kukunika umbono wentaka malunga nokuba uhlawula malini. Umzekelo, masithi uthengisa ii-CFD zesitokhwe. Umahluko phakathi kwexabiso lokuthenga nokuthengisa yi-0.5%, oko kuthetha ukuba uhlawula ukusasazeka okulingana ne-0.5%.
Ke, oku kuthetha ukuba xa ubeka urhwebo lwakho, kuya kufuneka wenze ubuncinci i-0.5% kwinzuzo ukuze uphule. Kananjalo, ukubanzi ukusasazeka, kokukhona kunzima ukukufumana ukwenza inzuzo. Kungenxa yoko le nto sikhuthaza kuphela iiakhawunti zokurhweba eziza nokusasazeka okuqinileyo.
Ukuxhamla kwiiAkhawunti zokuThengisa zase-UK
Ukuba ujonga ukuvula iakhawunti yokurhweba yase-UK, iindaba ezimnandi zezokuba uya kuba nakho ukufaka isibonelelo kuninzi lweeasethi ezixhaswa ngumrhwebi. Iindaba ezimbi kukuba uya kuncitshiswa kubungakanani bokusebenzisa onokufaka isicelo ukuba ungumthengisi wentengiso.
Njengoko sigubungele ngokufutshane ngaphambili, uya kuthathwa njengomthengi kwintengiso ngaphandle kokuba ujonge ukutyala imali njengomrhwebi oqeqeshiweyo. Kuya kufuneka ubonakalise imeko yakho yobungcali ngokufaka amaxwebhu adityaniswe kwixabiso lakho kunye namava okurhweba ngeeasethi.
Njengomthengi kwintengiso e-UK, uya kubotshelelwa kukuncitshiswa komda obekwe yi-European Securities and Markets Authority (ESMA) - esiyichaze apha ngezantsi.
Izibini eziphambili ze-forex: 30: 1
Incinci / i-exotic ye-forex yamabini, igolide kunye nee-indices ezinkulu zeCFD: 20: 1
Zonke ezinye izinto zeCFD: 10: 1
Izitokhwe zeCFD kunye nezabelo: 5: 1
Iimali zemali zedijithali: 2: 1
Njengoko ubona koku kungasentla, umda weakhawunti yakho yorhwebo uya kugqitywa ngomngcipheko wodidi oluthile lweeasethi. Umzekelo, ezona zibini ziphambili ze-forex ziza nemida ephezulu, kuba ukungazinzi ngokubanzi kuphantsi. Kwelinye icala lesiphelo, i-cryptocurrensets efana neBitcoin kunye Ethereum imvume kuphela yokuphakamisa i-2: 1 njengoko zizinto zexabiso eziqikelelweyo.
Ungazifumana njani iiAkhawunti eziGqwesileyo zokurhweba zase-UK?
Ke ngoku ekubeni uyazi i-ins kunye nokuphuma kwendlela esebenza ngayo iiakhawunti zokurhweba- kunye neeasethi ezininzi onokuzithengisa, ngoku kufuneka uqale ngokucinga ngeqonga elithile onqwenela ukulisebenzisa.
Kwelinye icala, kukho amakhulu e-FCA abarhwebi abalawulwayo abasebenza kwimakethi yase-UK, elungileyo kakhulu kukhetho lwabathengi. Ngakolunye uhlangothi, oku kwenza ukuba kube nzima ukwazi ukuba ngubani oza kubhalisa.
Kananjalo, sicebisa ukuba sifunde ezi ngcebiso zilandelayo malunga nendlela yokufumana ezona akhawunti zorhwebo zase-UK.
Izibuko lakho lokuqala lokufowuna kufuneka liqinisekise ukuba umboneleli weakhawunti yorhwebo ulawulwa. Oku kubalulekile, njengoko kuya kuqinisekisa ukuba iimali zakho zihlala zikhuselekile ngalo lonke ixesha. Ngaphaya koko, abarhwebi abalawulwayo bayacelwa ukuba bagcine imali yabathengi kwiiakhawunti zebhanki ezahluliweyo.
Oku kusebenza njengokhuselo kwimeko apho umrhwebi eyekile ukubakho. Ukuba use-UK, mhlawumbi kungcono usebenzise i-FCA elawulwa ngumthengisi. Ngenye indlela, ukuthandwa kweCySEC kunye ne-ASIC ikwangumzimba ohlonitshwayo welayisensi.
Uya kuthengisa iiasethi ngokutshintshiselana ngeepawundi zehlabathi kunye nepeni, ke kuya kufuneka uqiniseke ukuba indlela yakho oyikhethileyo yokuhlawula iyaxhaswa. Eyona ndlela ilula yokufumana imali kwiakhawunti yokurhweba kukusebenzisa ikhadi ledebhithi okanye lekhredithi. Ngokwenza njalo, iakhawunti yakho yorhwebo iya kufakwa kwangoko.
Uninzi lweeakhawunti zokurhweba nazo zinokuxhaswa ngemali ngogqithiso lwebhanki. Nangona le yinkqubo ecothayo xa kuthelekiswa ne-caRD yetyala / yekhredithi, uya kuhlala uzuza kwimida ephezulu. Abanye abathengisi baya kuxhasa ii-e-wallets ezinjengePaypal kunye neSkrill.
Njengoko besitshilo ngaphambili kwisikhokelo sethu, kuyakufuneka wenze uluhlu lwezinto ezinokuqwalaselwa xa kufikwa kwimirhumo. Oku kuqala kwangoko ngentlawulo yedipozithi, emva koko zithunyelwe iikhomishini kurhwebo ngalunye olwenzileyo.
Kuya kufuneka uphonononge ukusasazeka okuya kufuneka ukuhlawula kwiiklasi zakho ozithandayo zeasethi. Konke kuko konke, gxila kwiiakhawunti zokurhweba ezinikezela ngeedipozithi zasimahla kunye nokurhoxa, ukusasazeka okuqinileyo, kunye nentengiso ye-zero-ikhomishini.
Izixhobo ezikwisiko lesiqhelo
Kuya kufuneka uphonononge ukuba loluphi udidi lweeasethi ezixhaswa ngumrhwebi. Umzekelo, konke kulungile kwaye kulungile ukuba iqonga libonelela ngemirhumo ephantsi, kodwa uya kushiyeka uphoxekile ukuba ufuna ukurhweba ngemali ethile kwaye ayixhaswanga. Kananjalo, khangela uluhlu lomthengisi lwezixhobo ezinokurhweba ngaphambi kokuvula iakhawunti yokurhweba.
🥇 Izixhobo zoHlahlelo lobuGcisa kunye neziSisiseko
Ukuze uhlalutye iimarike zezemali kwaye ke uqikelele ukuba yeyiphi na i-asethi enokuthi ihambe, uyakufuna uncedo lwezixhobo zophando. Phambili koku kuhlalutyo lobuchwephesha, olubhekisa kwinkqubo yokufunda iipateni zetshathi eyimbali.
Kananjalo, uya kufuna ukuvula iakhawunti yokurhweba nomthengisi oxhasa iimfumba zezalathi zobugcisa. Ngokufanayo, uphando olusisiseko lubalulekile xa kuthengiswa kwi-Intanethi. Oku kubhekisa kwiziganeko zeendaba zokwenyani, kunye nendlela iindaba ezinokuthi zibe nefuthe ngayo kwixabiso elizayo leasethi.
Resources Izixhobo zemfundo
Ukuba uyi-newbie epheleleyo kwilizwe lezorhwebo kwi-Intanethi, kungcono usebenzise i-broker enikezela ngezixhobo zemfundo. Oku kuyakuvumela ukuba uphucule izakhono zakho kunye nolwazi lokuthengisa nge-Intanethi ngaphandle kokufuna ukusebenzisa izixhobo zangaphandle. Cinga kwimigca yeevidiyo, izikhokelo zenyathelo nenyathelo, izimvo zorhwebo, ii-webinars, kunye neesemina.
Support Inkxaso yoMthengi
Okokugqibela, ungalibali ngenkxaso yabathengi- emva kwayo yonke loo nto, kungafika ixesha apho ufuna uncedo kwiakhawunti yakho yorhwebo. Kungcono ukunamathela kubarhwebi ababonelela ngenkxaso yabathengi abangama-24/7 kuwo onke amajelo ahlukeneyo. Ingxoxo ebukhoma yeyona ilungileyo, nangona abanye abathengisi bekhetha inkxaso yefowuni okanye i-imeyile.
Uyivula njani iAkhawunti yoRhwebo: Isikhokelo samanyathelo ngenyathelo
Ke ngoku ukuba uyazi ukuba ungayifumana njani iakhawunti yokurhweba ehlangabezana ngokufanelekileyo neemfuno zakho, ngoku siza kuphonononga inkqubo yokuvula iakhawunti. Iindaba ezimnandi zezokuba inkqubo yokuphela kokuphela kokubhalisa, ukuqinisekisa ubungqina bakho, ukufaka imali, kunye nokubeka urhwebo kunqabile kuthatha ngaphezulu kwemizuzu eli-10-15.
Kananjalo, landela nje isikhokelo ngamanyathelo ngamanyathelo achazwe apha ngezantsi ukuze uqalise ngoku.
Inyathelo 1: Khetha iAkhawunti yoRhwebo yase-UK
Ukufumana ukuqengqeleka kwebhola, kuya kufuneka ufumane umniki-akhawunti wezorhwebo. Eyona ndlela yokwenza oku kukulandela iingcebiso eziluncedo esizichaze kwicandelo elingentla.
Ngale nto ithethwayo, ukuba awunalo ixesha lokuphanda ngomrhwebi ngokwakho, sidwelise iiakhawunti ezintlanu eziphambili zokurhweba zase-UK ezantsi kweli phepha.
Zonke iiakhawunti zokurhweba zixhaswa liqela elinye lolawulo olunjenge-FCA kunye neCySEC, kwaye iifizi zikhuphisana kakhulu.
Inyathelo 2: Vula iAkhawunti yoRhwebo kwaye uQinisekise ubuChongiwe
Intloko ngaphaya kwiphepha lasekhaya lomthengisi wakho omkhethileyo kwaye ukhethe ukuvula iakhawunti entsha yorhwebo. Njengokuba kunjalo kulo lonke utyalomali kwi-Intanethi, umrhwebi kuya kufuneka aqokelele ulwazi ngawe.
Oku kuya kubandakanya:
Igama lokuQala kunye lokugqibela
Inombolo ye-Inshurensi yeSizwe
Amava okuThengisa kwangaphambili
Ukuze uthobele imithetho echasene nemali, umrhwebi kuya kufuneka aqinisekise isazisi sakho. Abanye abarhwebi bayakuvumela ukuba ukwenze oku kamva, nangona, kuya kufuneka uyenze le nto ngaphambi kokuba uvunyelwe ukuba urhoxe. Kananjalo, kungcono ukuba inkqubo iphume endleleni ngoku.
Ukugcwalisa inkqubo ye-KYC (Yazi uMthengi wakho), kuyakufuneka ulayishe ikopi ecacileyo yepasipoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba. Abanye, kodwa ayingabo bonke, ababoneleli ngeakhawunti yokurhweba baya kucela ubungqina bedilesi yakutshanje- njengebhili yesixhobo okanye ingxelo yeakhawunti yebhanki.
Ngoku kuya kufuneka uxhase iakhawunti yakho yorhwebo esandula ukuyilwa. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, indlela ekhethekileyo yokubhatala eya kuthi ixhomekeke kumthengisi omkhethileyo. Nangona kunjalo, oku kubandakanya idebhithi / ikhadi lekhredithi, i-e-wallet, okanye ukuhanjiswa kwebhanki. Qiniseka ukuba uyayifumana imali encinci yedipozithi yomthengisi.
Ngoku ukuba ubeke imali, ukulungele ukubeka urhwebo lwakho lokuqala. Kusenokwenzeka ukuba umboneleli weakhawunti yakho yorhwebo oyikhethileyo ubonelele ngamawaka ezixhobo zezezimali kwimfumba yeeklasi zeasethi, ke kuya kuba kuhle ukuba ukhangele isixhobo onqwenela ukusithengisa.
Emva koko, kuya kufuneka ukuba usete iodolo. Oku kunokuba yinto edidayo ukuba awuzange uthengise ngaphambili, ke qiniseka ukuba uphonononge la manqaku adweliswe ngezantsi.
Thenga / thengisa iodolo: Oku kubhekisa kwicala ocinga ukuba ziya kuthengiswa ziimarike. Umzekelo, ukuba ucinga ukuba i-asethi iya kunyuka ngexabiso, beka i-oda 'yokuthenga'. Ngenye indlela, ukuba ucinga ukuba ixabiso leasethi liza kuhla, ungalifutshane ngokubeka i-oda 'yokuthengisa'.
Isiteki: Oku kubhekisa kwimali onqwenela ukuyifaka kurhwebo lwakho. Faka oku ngeeponti kunye neepeni.
Umyalelo weNtengiso / umda: Ukuba uyonwabile ngokuthatha ixabiso elilandelayo kwi-asethi oyikhethileyo, shiya ibhokisi yoku-odola ebekwe kwi-odolo 'yentengiso'. Ukuba ufuna ukukhetha ixabiso elithile oza kungena ngalo kwimarike, yitshintshe ibe 'ngumda' woku-odola.
oluxhathisayo: Eli linqanaba oza kuba nakho ukusebenzisa ubungakanani kumyalelo wakho. Ungalibali, imida yakho iya kumiselwa yimpahla oyithengisayo.
Ukuphulukana nokupheliswa: Ungafaka ixabiso ofuna urhwebo lwakho lusondele kulo ukuba iimarike zihamba ngokuchasene nawe.
Thatha iNzuzo: Oku kukuvumela ukuba utshixe ngokuzenzekelayo kwiingeniso zakho xa iiasethi zibetha ixabiso elithile.
Okokugqibela, qinisekisa urhwebo lokwenza iodolo yakho.
Ezona Akhawunti ziNtengiso ze-UK zaBarhwebi kwi2022-Ukukhetha kwethu
Ukuba ukulungele ukuqala ukuthenga nokuthengisa iiasethi ngoku, kodwa kubonakala ngathi awufumani broker uhlangabezana neemfuno zakho, apha ngezantsi sidwelise iiakhawunti zethu ezintlanu eziphezulu zokurhweba kwi-Intanethi ze-UK ze2021.
Umrhwebi ngamnye uhlangabezana neemfuno zethu ezingqongqo. Oku kubandakanya imetriki ejikeleze ummiselo, iifizi eziphantsi, ukusasazeka okuqinileyo, iindlela zokuhlawula, kunye nenkxaso yabathengi.
Indawo yotyalo-mali yase-UK ilikhaya lamakhulu eeakhawunti zokurhweba kwi-Intanethi. Oku kwenza ukuba kube lula kakhulu ukuthenga nokuthengisa iiasethi kwinduduzo yekhaya lakho -nje ngefowuni yakho ephathekayo. Nangona kunjalo-kwaye njengoko sigubungele kakhulu kwisikhokelo sethu, akukho-brokers zimbini ezifanayo. Kananjalo, oku kunokuba ngumsebenzi otyhafisayo ekwazini ukuba yeyiphi iakhawunti yokurhweba efanelekileyo kwiimfuno zakho zobuqu.
Ukukunceda apha endleleni, sixoxe ngezinye zezinto ezininzi ekufuneka uzijongile xa ukhetha umboneleli weakhawunti yorhwebo. Oku kubandakanya umgaqo, iikhomishini eziphantsi okanye zero, ukusasazeka okuqinileyo, iimfumba zeendlela zokuhlawula zemihla ngemihla, ukhetho olufanelekileyo lwezixhobo zophando, kunye nenkxaso yabathengi. Ngokubalulekileyo sidwelise iiakhawunti zethu zokurhweba zase-UK eziphezulu ze2021 kwabo bakho abanaxesha lokwenza uphando lwakho.
Ndiyifaka njani imali kwiakhawunti yam yorhwebo?
Ngokwesiqhelo ungabeka kwaye urhoxise imali ngedebhithi okanye ngekhadi letyala, ukuhambisa ngebhanki, okanye i-e-wallet
Ngaba zonke iiakhawunti zokurhweba zibonelela ngombane?
Ewe iiakhawunti ezininzi zokurhweba zase-UK zikuvumela ukuba ufake isicelo. Nangona kunjalo, uya kuncitshiswa kubungakanani bemilinganiselo onokuyisebenzisa-ngokwemigaqo ye-ESMA. Oku kwahluka ukusuka ku-2: 1 kuye ku-30: 1, kuxhomekeka kwimpahla oyithengisayo.
Yeyiphi eyona dipozithi ifunekayo xa uxhasa iakhawunti yam yorhwebo?
Ngokwesiqhelo kufuneka ubeke kwingingqi ye- $ 50 kunye ne- £ 150 xa useta iakhawunti yakho. Inani elithile liya kwahluka ngokuxhomekeka kumthengisi okhethiweyo.
Ngubani olawula iiakhawunti zokurhweba ezikwi-Intanethi e-UK?
Uninzi lweakhawunti yorhwebo e-UK ilawulwa yi-FCA. Amanye amabhunga aziwayo anelayisensi abandakanya i-ASIC, iCySEC, kunye neMAS.
Ngaba iakhawunti yokurhweba yase-UK ixhasa ukuthengisa okufutshane?
Ewe, njengoko iiakhawunti ezininzi zorhwebo zixhasa iimveliso zeCFD, uya kuba nokukhetha ukuthengisa ngokufutshane izinto zakho ozikhethileyo.
Ngaba ndizakufumana izabelo zestokhwe xa ndikwiakhawunti yam yorhwebo?
Ukuba usebenzisa iakhawunti yokurhweba ebonelela ngamasheya kunye nezabelo ngohlobo lweCFDs, awuyi kuba nelungelo lokufumana izabelo. Kungenxa yokuba awunayo iarhente engaphantsi. Ukuba izabelo ozilandeleyo, kuyakufuneka uvule iakhawunti yokujongana nesabelo kunye nomthengisi-sitokhwe omiselweyo.
Ngaba iiakhawunti zorhwebo ezingahlawulwanga zikho ngenene?
Kwelinye icala, iarhente engenazikhomishini ikuvumela ukuba uthengise iiasethi ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini yomrhwebi. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uthathe ukusasazeka kwiakhawunti, kuba oku akunakuthintelwa nokuba usebenzisa bani.